Ahoana ny fanesorana feo amin'ny horonan-tsary amin'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Ahoana ny fanesorana feo amin'ny horonan-tsary amin'ny Mac
Raha ny fizarana horonan-tsary, miankina amin'ny votoatiny, dia mety ho liana isika esory ny feo. Afaka mahita ny tenantsika ao anatin'izany filàna izany koa isika rehefa manova horonan-tsary avy amin'ny Mac mba hanampiana dubbing, mozika lafika ...
Na inona na inona antony tianao esory ny feo amin'ny horonan-tsary amin'ny Mac, amin'ity lahatsoratra ity dia hasehontsika anao ny fomba hanaovana izany. Mba hanatanterahana izany dingana izany dia afaka mampiasa fampiharana maimaim-poana sy karama isika.
4 Tapaka mahafatifaty
iMovie, araka ny fantatrareo rehetra, dia ny fampiharana fanitsiana vidéo maimaimpoana izay atolotry ny Apple ho an'ny mpampiasa iOS sy macOS rehetra. Sahala amin'ny Mini Final Cut Pro, rindrambaiko mpamoaka matihanina Apple izay mitentina 300 euros mahery.
Miaraka amin'ny iMovie, tsy vitan'ny hoe mamorona horonan-tsary mahafinaritra fotsiny isika, mampiasa môdely, fiovana isan-karazany, milalao miaraka amin'ny fototra maitso na manga mba hanoloana azy amin'ny sary hafa, fa koa mamela antsika hanala ny feo amin'ny lahatsary rehetra.
Raha efa niasa tamin'ny programa fanovana video ianao teo aloha, dia ho afaka hanamarina ny fomba ny fiasan'ny iMovie dia tena mitovy, miaraka amin'ny fandaharam-potoana ahafahantsika mametraka ny filaharan'ireo horonan-tsary, ireo rindran-peo alefa ...
Ny horonan-tsary izay mampiditra ny feony manokana dia misy ao anatiny, a tsipika maitso izay mampiseho antsika ny haavon'ny feon'io hira io. Amin'ny alàlan'ny default, ny feo dia alefa amin'ny 100%, izany hoe, amin'ny volume mitovy amin'ny noraketina azy.
Raha te hampidina ny feo isika dia tsy maintsy apetraho eo ambonin'io tsipika io ny totozy ary ampidino mandra-pahitanao ny haavon'ny feo mety. Fa raha ny hamongorana azy tanteraka no tadiavintsika dia tsy maintsy ampidinintsika io tsipika io mandra-pahatongan'ny haavon'ny volume ho aotra.
Raha vao nampidina ny haavon'ny horonan-tsary na sombin-dahatsary ho aotra dia tsy maintsy vonjeo ny tetikasa ary manondrana azy amin'ny endrika tiantsika mba hozarainay any aoriana.
Raha ny tianao dia ny mamafa ny feo amin'ny lahatsary iray izay ho ampahany amin'ny hafa, tsy mila mamafa azy tsy miankina ianao, satria azonao atao ao anatin'ny fandaharam-potoanan'io horonan-tsary io, satria mahaleo tena ny rindran-peo amin'ny horonan-tsary rehetra, izany hoe afaka mampiakatra, mampidina na mamafa ny feo araka ny filantsika tsy misy. misy fiantraikany amin'ny horonan-tsary sisa.
Ianao dia afaka Download iMovie maimaim-poana tanteraka ho an'ny macOS amin'ny alàlan'ity rohy ity.
VLC no mpilalao horonan-tsary tsara indrindra eny an-tsena ary rehefa miteny aho hoe ny tsara indrindra dia ny tsara indrindra no tiako holazaina, fa tsy ny iray amin'ireo tsara indrindra. Ny interface interface taloha, VLC dia a mpilalao mifanaraka amin'ny tsirairay sy ny tsirairay amin'ny lahatsary sy feo endrika eny an-tsena.
Ankoatra izany, dia izany loharanom-baovao misokatra, noho izany dia tsy mila mandany euro na iray aza isika amin'ity fampiharana ity mba hidirana amin'ny asany rehetra. Ity tetikasa ity dia tazonina mifototra amin'ny fanomezana avy amin'ny mpampiasa. ary azo alaina ho an'ny rafitra miasa rehetra azonao alaina sary an-tsaina.
Ny VLC dia tsy vitan'ny mpilalao horonantsary mahafinaritra, fa misy ihany koa ny endri-javatra fanampiny toy ny fahafahana misintona horonantsary YouTube, synchronize audio sy vidéo (rehefa tsy mandeha an-tanana ireo) ary na dia ny mety hisian'ny esory ny feo amin'ny horonan-tsary.
Para esory ny feo amin'ny horonan-tsary Miaraka amin'ny fampiharana VLC dia tsy maintsy manao ny dingana izay asehoko anao eto ambany isika:
Rehefa nosokafanay ny fampiharana VLC dia tsy maintsy mifantina ny horonantsary izahay izay tiantsika hanesorana ny feo.
Manaraka, tsindrio eo Fitaovana - Preferensi.
Ao amin'ny fizarana Préférences dia mankany amin'ny Audio. Ao amin'ny zoro ambany ankavia tsindrio eo Todo.
Avy eo ao amin'ny boaty fikarohana dia manoratra izahay Alefaso ny feo.
Eo amin'ny tsanganana havanana, esory ny mari-pamantarana Ampiasao ny feo.
Ary farany, tsindrio ny bokotra afa-tsy ny fanovana novainay.
Fampiharana maimaim-poana sy open source hafa mahafinaritra izay ahafahantsika manao izany miasa amin'ny fanovana video dia Avidemux, fampiharana efa teny an-tsena nandritra ny taona vitsivitsy ary azo antoka fa efa nandre izany ianao, farafaharatsiny ireo tranainy indrindra, satria nampiasaina tsy tapaka rehefa nanana olana tamin'ny fampifanarahana ny feo sy ny horonan-tsary.
Fa ho fanampin'ny famelana antsika hampifanaraka ny feo sy ny horonan-tsary, ny fampiharana ihany koa mamela antsika hanaisotra ny raki-peo tanteraka avy amin'ny horonan-tsary. Mba hanesorana ny rindran-peo amin'ny horonan-tsary miaraka amin'i Avidemux dia tsy maintsy manao ny dingana asehoko anao eto ambany isika:
Voalohany, mihazakazaka ny fampiharana ary Sokafy ny horonan-tsary izay tiantsika hanesorana ny feo.
Manaraka, eo amin'ny tsanganana ankavia, ao amin'ilay faritra Famoahana audio, kitiho ny menio midina ary safidio tsy misy (tsy misy amin'ny teny anglisy).
Farany, tsindrio ny Ny menio fisie ary mifidiana Save.
Ianao dia afaka Download Avidex maimaim-poana tanteraka ho an'ny macOS amin'ny alàlan'ny ity rohy ity
Rehefa nandeha ny taona, iMovie nitombo ny fepetra takiana ambany indrindra Mba handehanana amin'ny macOS ary amin'izao fotoana izao dia ny macOS 11.5.1 Big Sur ny dikan-teny tohana ambany indrindra.
Raha ny ekipanao tsy mifanaraka amin'ny iMovie, ary te hanova ny horonan-tsarinao amin'ny fomba tsotra ianao, ankoatra ny fananana safidy hanesorana ny feo amin'ny horonan-tsary, dia tokony hanandrana Cute Cut ianao, fampiharana azonay alaina maimaim-poana ao amin'ny Mac App Store ary izany tsy ahitana karazana fividianana in-app izany.
Ny fiasan'ity fampiharana ity dia mitovy amin'ny programa fanovana video hafa. HO AN'NY esory ny feo amin'ny horonan-tsary, dia tsy maintsy ampidirintsika ao amin'ny fandaharam-potoana izany ary, eo amin'ny tsanganana havanana, ao amin'ny fizarana Feo, ampidino ny feo ho faran'izay kely indrindra.
Tapaka mahafatifaty dia mifanaraka amin'ny OX 10.9, dikan-teny natomboka teny an-tsena tamin'ny 1999, izany hoe mifanaraka amin'ny Mac rehetra nanomboka tamin'io taona io.
Azonao atao télécharger Cute Cut maimaim-poana tanteraka ho an'ny macOS amin'ny alàlan'ity rohy ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny fanesorana feo amin'ny horonan-tsary amin'ny Mac
Ny wallpapers tora-pasika tsara indrindra ho an'ny Mac
Apple dia manidy fivarotana bebe kokoa noho ny areti-mifindra